LANDA I-Simhangar RWD-8 PWS FSX & P3D - Rikoooo
Play 5 054
Umbhali: Simhangar Team, Lukasz Kubacki, uMikhali Puto
I-RWD-8pws ye FSX & P3D zekhwalithi ephezulu nobuhle. Indiza iphethe uhlelo lokupenda oluvela eCWL Dêblin (isikole esindizayo). Kwenziwe nge FSX-Ukufinyelela i-SDK. Kusho ukuthi kufanele ube namanani entengo amahle ngawo. Ngaphezu kwalokho, uzosebenza kumodi ye-DirectX 10 evuliwe ngaphandle kwezinkinga. Uyazicabanga futhi uzenzele okhethekile njengokuthi: Amamephu Akhethekile Nemephu Ejwayelekile. Qaphela, ukuthi ngenxa yemikhawulo ye-cockpit ye-3D ayisebenzisi ukuzimela kwe-VC.
I original model 3D lakhiwa seMpi phezu Poland Mod eyakhelwe Targetware SIM injini. Lokhu indiza yiyona RWD-8pws version. Nokho, it kwanezelwa ambalwa kapende engalwi Amacebo RWD-8 dwl, futhi (bheka ngezansi). Phawula, ukuthi kusenzima PWS model version 3D.
Izinhlobo ze-RWD-8 zitholakala ku- FSX/P3D thwala:
RWD-8pws, Centrum Wyszkolenia Lotniczego (CWL) Deblin, maphakathi no-30 sika, Poland RWD-8pws, isiRomania Air Force, zakuqala 40 sika
RWD-8pws, Training isigaba, 1st Air Regiment, waseWarsaw, ePoland RWD-8pws, Gen. Franco sika Army, Spain, sekwephuzile 30 sika.
RWD-8pws, 6th Air Regiment, Lwow, Poland RWD-8pws, Luftwaffe izivivinyo, ekuqaleni kwawo 40 sika.
RWD-8dwl, irejista civil SP-ZHP, Bielsko Aleksandrowice Aerodrome (EPBA), Poland RWD-8dwl, irejista civil VQ-PAK, inkampani izindiza Jewish "Aviron", zakuqala 40 sika, Palestine.
RWD-8dwl, irejista civil SP-BLC, Warsaw Aero club, Mokotow Idoyelwana leemphaphamtjhini zepi RWD-8pws, Soviet Air Force, zakuqala 40 sika
RWD-8pws, isiHungary Air Force, zakuqala 40 sika
Qaphela: Uzothola nefolda ethi "Paintkit" ku- FSX/ I-SimObjects / Izindiza zezindiza / ifolda yeRWD_8pws. I-paintkit iqukethe amafayela we-.PSD amathathu nazo zonke izendlalelo ezidingekayo ukwenza ukulungisa kabusha.
Sicela ufunde imibhalo kuhlanganisiwe
Le video ibonisa indlela alpha version olunganqanyuliwe, phawula ukuthi imodeli etholakalayo umxokozelo on Rikoooo luyimfanelo okuphelele futhi ezingcono.
I-FIAT G.18V (V.01) FSX